2012 ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း (Tag)
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျာ …. ။ တဂ်ပို့ စ် မရေးရတာတော်တော် ကိုကြာပါပြီ … ။ အစ်မ ပစ်ပစ် က သတိတရ တဂ်ပေးထားလို့ဝမ်းသာအားရ ချရေးမိပါတယ် … ။
ရုပ်ရှင်ရုံတွေထဲမှာ ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့ ….. 2012 …
ရခိုင်လူမျိုးများ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ ….. 2012 ….
တိုက်ပွဲတွေ ၊ ဆန္ဒ ပြပွဲတွေ ခဏခဏ မြင်ရတဲ့ …. 2012 …..
မပြောင်လဲနိုင်တဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ .....2012 .....
အဲ့ ၂၀၁၂ ဟာ ကျနော်အတွက်တော့ ခရီးသွားနှစ် ပါပဲ ။ နှစ်လည်း ကုန်တော့မယ် ကျနော် လည်း ဘယ်မှ မသွားရတော့ပါဘူး ။ ၂၀၁၂ နှစ်ဟာ ကျနော် အတွက် ထူးခြားတဲ့ နှစ် တစ်နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမ ထူးခြားမှု ကတော့ ကျနော် အလုပ်ပါ ။ အပြောင်းအလဲ အ၇မ်းများပါတယ် ။ စိတ်မဝင်စားတဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ လခ ကြောင့် မြန်မာပြည်ပြန်မဲ့ အစီစဉ်ကို ဖျတ်သိမ်းပြီး ရွေးချယ်ခဲ့မိပါတယ် ။ တစ်ခုကို လိုချင်ရင် တစ်ခုဆုံးရှုံးတယ်ဆိုသလိုပါပဲ ။ အလုပ်ချိန် တနေ့ ၁၃ နာ၇ီ ဖြစ်သွားကြောင့် ကျနော် အတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန် အရမ်းရှားသွားပါတယ် ။ အရင်လို blog မှာ စာများများမရေးဖြစ်တော့ပါဘူး ။ နောက်တစ်ခုကတော့ အလုပ်မှာ တာဝန်ယူရတဲ့ အပိုင်းတွေ များလာတာကြောင့် ကျနော်အတွက် ဖိအားတွေ များခဲ့ပါတယ် ။ လူတိုင်း လောဘ ဆိုတာရှိတာကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု တွေလည်းရှိခဲ့ပါ ။ ကျနော် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ဟာ အစပိုင်းမှာ ဖိအားတွေ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကျနော် အတွက်ပျော်စရာဆိုတဲ့ အချိန်အလွန်းရှားခဲ့ရပါတယ် … ။
အဲ့ အကျိုးဆက်တွေ လားတော့မသိပါ ။ ၂၀၁၂ မှာ မကြာမကြာ ကျန်းမာရေးမကောင်း တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော် ပျော်ရတဲ့ နေ့ ၇က်တွေကတော့ လစာ ထုတ်တဲ့နေ့ ပါ ။ ကျနော် မျှော်လင့် ထားတဲ့ လစာ ရလို့ ပါ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်ကျေကျေနပ်နပ် ရွေးချယ်ထားခဲ့လို့ဒီ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ။ ဖိအားတွေ ပြိုင်ဆိုင်မှု တွေကြားမှာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ကျနော် နေသားကျလာပါပြီ ။ တခါတခါ အလုပ် လုပ်ရင်း ကျနော် သိမ့်ကြိုက်တဲ့ ဟန်ထူးလွင်သီချင်းလေး ဆိုရင်း ပျော်တက်နေပါပြီ … ။
ဒုတိယ ထူးခြားတာ ကတော့ ၂၀၁၂ မှာ ကျနော် ရဲ့ ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်မို့ဆွေးနွေး ပြင်ဆင် ခဲ့ပါတယ် ။ ဘဝ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပေါင်းစပ်မို့ထင်သလောက် မလွယ်မှန်းကျနော် နားလည်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော် ရော ချစ်သူမှာ အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှု့မရှိတာကြောင့် ကျနော် တို့ဘဝကို အခြေခံကနေ စပြီး တည်ဆောက် ခဲ့ရပါတယ် ။ ကျနော် တို့လက်ထပ်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အချိန်ကစ ပြီး ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကြားမှာ ရှိတဲ့ အလိုမကျမှု့ လေးတွေ ၊ သာတယ် နာတယ် ဆိုတဲ့ အတွေး တွေဟာ အလိုလို ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ် ။
ချစ်သူ ဖြစ်ကာစက တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စိတ်ဆိုးကြတာ ၊ သာတယ် နာတယ်လို့တွေးမိတာတွေဟာ တစ်ကယ် တမ်း ဘဝတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်မို့တွေ့ ကြုံရတဲ့ အခက်ခဲတွေ နဲ့နှိုင်းယှဉ် မယ်ဆိုရင် ဘာမှကိုမပြောပလောက်အောင် သေးငယ်သွားပါတယ် ။ တစ်ဦးကို တစ်ဦးလည်းပိုပြီး သံယောဇဉ် ဖြစ်လာပါတယ် ။ အရင်ကထက်ပိုပြီး နားလည်မှု့ တွေ ပေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော် တို့ရည်မှန်းထားတဲ့ တစ်ခု ပြီးမြှောက်တိုင်း ပီတိ တစ်ခု ခံစားမိတယ် ။ ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ ဘဝ တစ်ခု ကိုမမျှော်မှန်းခဲ့ပါဘူး ။ အေးချမ်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကိုပဲ မျှော်မှန်းပြီး တည်းဆောက်ခဲ့တာပါ ။
ဒီလို အေးချမ်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မို့အစပြုခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ဟာ ကျနော်တို့ အတွက် တစ်သက်တာမေ့မရတဲ့ နေ့ ရက်တွေအဖြစ်အမြဲ ရှိနေမှာပါ …. ။
အချိန်ဆိုတာ ကုန်ဆုံးတက်သည်မဟုတ်ပါလော … ။ ၂၀၁၂ လည်းကုန်တော့မယ် တစ်နှစ်ကုန်သွားတိုင်း ကျနော် ပြန်သုံးသပ်မိပါတယ် ဒီနှစ်မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘာတွေ ဖြစ်သွားလည်းပေါ့ .. ။
၂၀၁၂ မှာ ကျနော် အတွက် ဖိအားတွေနဲ့အလုပ်တိုးတက်ခဲ့ပါ ။ အဲ့ဖိအားတွေကြောင့် ထင်တယ် ကျနော် နည်းနည်း ရင့်ကျက်လာသလိုပဲ … ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာ များများ မရှိတဲ့ ဘဝ ထဲမှာ အရာအားလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင် ၂၀၁၂ ဆို ကုန်ဆုံးတော့ပါမယ် ။
နှစ်သစ်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၃ မှာတော့ စိန်ခေါ်မှု တွေ အများကြီးရှိနေမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ပြီးသာပါ ။ ရင်ခုန်မှု တွေလည်းအပြည့်ပါပဲ ။ ချစ်သူနဲ့လက်ထပ် ရမည့် နှစ်ပေါ့ ။ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရမဲ့ နှစ်ပေါ့ ။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၃ ဆိုတာကို ရင်ခုန်စွာမျှော်လင့်မိရင်း … ဒီ Post လေးကို အဆုံးသက်လိုက်ပါတယ် … ။
ကျနော်ရဲ့ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပြီ ၊ ကံကောင်းခြင်းတွေ ယူဆောင်လာတဲ့ မင်္ဂလာ နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ … ။
ဒီ post လေးကိုရေးမို့တဂ်ပေးတဲ့ အစ်မ ပစ်ပစ် ကို ကျေးဇူးမိပါတယ် ။ အခုတလော ကျနော် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေလည်း ကျနော်လို စာရေးနည်းသွားသလိုပါပဲ ။ တချို့ လည်း facebook မှာ ပျော်နေကြသတဲ့ ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း စာများများမရေးဖြစ်တော့ပါဘူး ။ နောက်ပြီ ကျနော် blog လေးကိုလာလည်တဲ့ blogger အသစ်တွေ ကို ကျေးဇူးတင်ရတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီ Post လေးကို ခင်မင်စွာဖြင့် ဆက်လက်ပြီ တဂ် ပေးလိုက်ရပါတယ် ။ အချိန်လေးများရရင် ရေးပေးကြပါနော် …. ။
၁ ။ သမီးစံ ( facebook ကနေ ခဏလေးဆင်းခဲ့ပါ )
၂ ။ မဒမ်ကိုး ( အစ်မကြီးမဒမ် )
၃ ။ အစ်မ မိုးငွေ့ 
၄ ။ အစ်မ ချော ( အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
၅ ။ ကိုဘကြိုင် ( ကွန် မကောင်းဘူးလို့သတင်းရထားပါတယ် အစဉ်ပြေရင်ပေါ့ဗျာ )
၆ ။ မောင်တစ်လုံး
၇ ။ ချစ်စံအိမ် ( ကျနော်လိုပဲ စာရေးနည်းသွားတယ် )
၈ ။ အန်တီတင့်
၉ ။ ကိုအောင်ထွဋ် ( ချောင်းသာမှာ သူမ နဲ့ပျော်နေတာ နှောက်ယှက်သလို ဖြစ်သွား မလား ... :D )
၁၀ ။ ကိုလွင်ပြင်
၁၁ ။ အစ်မစံပယ်ချို
၁၂ ။ အစ်မ အိပ်မက်စေရာ
၁၃ ။ မိုးနတ်ကြယ်စင်
၁၄ ။ လရိပ်အိမ်
ကျန်အုံးမယ်ထင်ပါတယ် ... ။ ဒီ post လေးကို ဖတ်မိတဲ့ ကျနော် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အားလုံးကို တဂ် ပါတယ် ... ။ အချိန်က အရမ်းနောက်ကျနေလို ပါ ...။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေရင် ရေးပေးကြပါဗျာ ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:43 AM 11 comments
Happy anniversary ပါချစ်သူ ။ ချစ်ခြင်း နေ့ ရက်တွေ ၂ နှစ်ပြည့်ပါပြီ ။ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နေ့ ရက်တွေမှာ ကြည်နူးမှုတွေ ၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ ရက်တွေ ကို တွေးမိလိုက်တိုင်း ရင်ထဲမှာ ထားရှိတဲ့ အချစ်တွေ ခိုင်မာ ခဲ့ရပါတယ် ။
တစ်ခါတလေ …. အလိုမကျမှု တွေ ၊ ကွဲလွဲမှုတွေ ၊ အထင်လွဲမှုတွေ ရှိပင်မဲ့ ရင်ထဲမှာ ထားရှိတဲ့ ချစ်တွေ မလျှော့ခဲ့ပါဘူး ။
လက်ထပ်မို့ဆွေးနွေးလိုက်တိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့ ရက်တွေ ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့ …. ကိုတို့ဘဝ လိုအပ်ချက်တွေကြားမှာ အလွမ်းတွေကို အဖော်ပြုရင်း ရင်ထဲက အချစ်တွေ မပြိုလဲ ပါဘူး .... ။
နိုင်ငံတွေခြား လို့ ဝေးနေ လည်း
မင်း က ငါ့ အနားမှာ အမြဲရှိနေပါတယ် ….. ။
မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ နေ့ ရက်တိုင်းမှာ
မင်း က ငါ့ အနားမှာ အမြဲရှိနေပါတယ် ….. ။
မြတ်နိုးရာ နေ့ ရက်များဆီ …… သို့ …….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:04 AM7comments
အေးပါဘိ ဒီ ဆောင်းခို
တောင်ညိုမှာ မြူ သန်းပါလို့ 
လေညုင်းက ချို ကာမှ
ဆောင်းသဇင် နဲ့ ယှဉ်ကာထွန်းတဲ့
မွေးရက် အခါတော် ….. ။
ဆောင်း အတိတ်မို့ 
နောင် အရိပ် မှာ
ပျော်ရာတွေ လွှမ်းစေ တော့
မခွဲမခွာ မြဲရစေ တော့
happy birthday မှာ
ဆောင်းနှင့်အတူ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ရပါစေ .... ။
ယနေ့ ကျရောက်သော အစ်မ ပစ်ပစ် ရဲ့ မွေးနေ့ မှ သည်နောင်နှစ်များစွာထိ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:38 PM7comments
လွမ်းစိတ် ..... ။
ညယံတွေ အဖော်ပြုလို့ 
မရွှင်းသာ လွမ်းဆိပ်က စူး …..။
မျှော်သာ မျှော် ပေါ်မလာဘူး
ခေါ်သာ ခေါ် ပြန်မထူး
လွမ်းစိတ်က …. ရှုး …..
ထူးလေတဲ့ ဒီ …. စိတ်
ရူးလေတောင် မပြေဘူး …..
လွမ်းစိတ်နဲ့ ရှုး …….. ။
ချစ်သူရေ ကိုတို့ ရဲ့ အမှတ်တရနေ့ လေးမှာ အရင်လိုပဲ လွမ်းတွေနဲ့ကုန်ရပြန်ပြီ .... ။ ရွှေဖီမြေ ရောက်နေတဲ့ ကို ... ရဲ့ ချစ်သူ ကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိပါတယ် .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:03 AM5comments